WBO Maqaa ‘Araaraan’ Diiguuf Yaaluun Abjuu Dha! |
Home Afaan Oromoo WBO Maqaa ‘Araaraan’ Diiguuf Yaaluun Abjuu Dha!
WBO Maqaa ‘Araaraan’ Diiguuf Yaaluun Abjuu Dha!
Ibsa Ajajaa Olaanaa ABO/WBO, Gurraandhalaa 16 2020
(Qondaalaa) — Araarri Oromoo biratti kabajaa guddaa waan qabuuf, Oromoon ‘araarri kan waaqaati’ jedha. Araarri waan nagaa fiduuf nama biratti jaalatamaa dha. Haa ta’uutii, Oromoon maqaa ‘araaraan’ marraa hedduu goowwome, ganames. Seenaa Oromoo keessatti Goototi Oromoo kan akka Abishee Garbaa fi Jeneral Taddasaa Birru maqaa araaraan ganamanii bifa sukkaneessaan harka Nafxanyootaan ajjeefaman. HaileSillaaseenis Jeneral Waaqoo Guutuu maqaa araaraa fi jaarsummaan ganee gara qe’ee isaatti erga deebisee booda, Oromoo shiraan afaanfajjessee gabrummaa jala turse. Jaarmayaaleen siyaasaa Oromoos Impayera Itiyophiyaa keessatti hojjechuuf tattaafatan marti yeroo hedduu siyaasaan ganamuu irra darbanii itti milkaahanii hin beekan.
Bara 2019 keessa koreen ‘teknikaa’ jedhamtu maqaa ‘araaraan’ qawwee ilmaan Oromoon dhiiga isaaniitiin hidhatan irraa hiikuun diinaaf kennuu irra darbee, miseensota WBO kan qabsoo saba isaanii irra turan dogoggorsuun Xollayitti galchuun gaga’ama guddaa qabsoo saba kanaa irraan geessisan. Ilmaan Oromoo qaqqaaliis shiraa ‘qaama nageenya mootummaa’ jedhamuun bobbaafamanii galaafataman. Kol. Abiy ilmaan Oromoo dabaree dhaan rukutee cabsuuf karoorfates wal duraa duuba raawwataa jira.
Haala kana waliin wal qabatee, gidduu darbe ilmaan Oromoo Yuniversiiti keessaa barsiisan, Abbooti Gadaa fi jaarsoliin biyyaa haala uumati Oromoo Kibbaa fi Lixa Oromiyaa keessa jiru isaan yaaddesse yaaddoo isaanii ibsachuun akka mootummaan furmaata kennu Dr. Abiy, Lammaa Magarsaa fi Shimalis Abdiisaatti ibsa ejjennoo isaanii galchan. Abiyi, Lammaa fi Shimalis hiree kana itti dhimma bahuun namoota kana dogoggorsuuf ‘nuti WBO waliin araaramuu barbaadna, nu araarsaa’ jechuun shira isaanii itti fufan. Abbootiin Gadaa fi jaarsoliin kunis ‘karoorri keenyi jaarsummaa taa’uu osoo hin taane, uggurri uumata keenya irraa jiru haa ka’u! Bilbillii fi Interneti nuuf haa deebihu! Komaand Postii fi ajjeechaan uummata keenya irraa haa dhaabbatu! jennee isin gaafachaa jirra’ jedhan. Haa ta’u malee namooti lakkoofsaan bicuu ta’an dhugaa sehanii ‘isin araarsuu ni yaalla’ jedhanii turan. Namoota muraasa kan jaarsummaa keessatti hirmaachuuf fedha agarsiisan Abiyyi qofaati dubbise. Namooti garii erga dubbicha keessa arganii, shira qabaachuu hubatanii booda, akkuma kanaan duraa WBO galchaa akka jechaa jiru hubatanii dhimma jaarsummaa fi araara Abiy xaxaa jiru keessaa of-baasan.
Kol. Abiy Ahimed gama tokkoon lola sukkaneessaa uummata keenya irratti gaggeessaa, gama biraan ammoo lola qor-qalbii Oromoo irratti banee, haala kana dhoksuu fi afaanfajjii uumuuf ammoo maqaa ‘araara fi jaarsummaa’ fayyadama. Dhimmi kunis media OMN irratti akka gabaafametti namoota 30 ta’an akka haaraatti dhimma ‘araaraa fi jaarsummaa’ irratti hojjechaa akka jiran ibsame. Araarri fi jaarsummaan dhugaa qaama wal dhabe lamaan irraa kan tolfamu dha malee kan qaamni tokko qofaa namoota isaaf baabsan filatee bobbaafatu miti. Dhimma kana irratti ajajaan ol-aanaa ABO/WBO kan jaarsolii bakka buufate hin qabu. Inumaayyuu akka dhimmicha quba hin qabaatne uummata Oromoo hubachiisa.
Gaaffiin ummata Oromoo gaaffii siyaasaa kan murtii walaba uummataa barbaadu dha. Waan ta’eef, jaarsummaa fi araara gaggeessuu dura haal-dureewwan armaan gadii uummataaf guuruun dirqama ta’uu ajajaan ol-aanaa ABO/WBO akeekkachiisa:
Komaand post uummata keenya irraa kaasuu;
Waraana EPRDF/PP uummata keenya fixaa jiru uummata keessaa baasuu;
Quunnamtii bilbilaa fi internetaa deebisuu;
Hidhamtoota siyaasaa Oromoo mara hiikuu;
Hidhaa, reebichaa fi ajjechaa uummata Oromoo irratti gaggeeffamaa jiru dhaabuu;
Ilaalchaa fi gochaa Oromummaa cabsan mara hatattamaan dhaabuu;
Mirga hiree murteeffannaa Oromoo dura dhaabbachuu dhiisuu;
Ajjeechaa ilmaan Oromoo Yuniversity naannoo Amaaraa keessatti raawwatu dhaabuu;
Barattooti Oromoo naannoo Amaaraa keessatti barachuu dadhabanii biyya isaaniitti galan akka Oromiyaa keessatti rimiddii argatan hojjechuu;
Barattoota Oromoo barnoota irraa harihaman hatattamaan barnoota isaaniitti deebisuu dha.
Namooti dhimma jaarsummaa kana keessa goowwomtanii ykn dantaaf jecha seentanii uummata keenya afaanfajjessaa jirtan hatattamaan dhimma kana irraa akka dhaabbattan; akkasumas warri aangawoo dha ofiin jedhee dhugaa uummataa awwaaluuf shira dalagdanis, uummata bara baraan goowwomsuu fi afaanfajjessuun waan hin dandahamneef osoo yeroon keessan hin dabarre lola uummata irratti bantan dhaabdanii, uummatni rakkoo isaa akka furatuu saba kana jalaa maqxan ajajaan ol-aanaa ABO/WBO akeekkachiisa.
Abiy lola Nafxanyooti Oromoo irratti gaggeessan gargaaraa jira. Lola kana keessatti Oromoo irratti miidhaa fi yakka guddaatu dhaqabe. Yakkaa fi miidhaa kana qabata ‘jarsummaan’ dhoksuuf yaaluun hin danda’amu. Yakka Abiy Nafxanyootaaf jecha Oromoo irratti dalage seenaa fi seeraan kan isa gaafachiisu dha. Haala akkasii keessatti qaamni walaba ta’e miidhamaa fi yakka kana sirnaan ilaalee seeratti dhiyeessu jiraachuun barbaachisaa ta’uu AO-ABO/WBO hubachiisa.
Akeeki Abiy Ahimed uummata Oromoo lolaan jiilchee jilbeeffachiisuun WBO harka kennachiisuu ta’uun hubatameera. Jaarsi biyyaa haqa uummatni qabu kan hin dhoksne, kan qaama kamiifuu hin baabsiine, dhugaaf dhaabbatee haqa jiru kan uummata hubachiisu dha. WBOn ammoo haga dhugaan saba kanaa deebihutti kan falmaa isaa itti fufu ta’uu murannoo isaa ibsa. WBOn meeshaa diina irraa hiikkachuu malee hidhannoo isaa hiikkachuunis aadaa isaa miti. WBO maqaa ‘Araaraan’ diiguuf yaaluunis abjuu guutamuu hin dandeenye dha!
Guraandhala 16, 2020
Previous articleQeerroo Harargee Ciroo Gara Galgalaa, Gurraandhala 16, 2020
Next articleMagaalaa Jimmaatti Waajjira ABO/OLF banamu wajjiin walqabate Qeerroo Jimmaa Hiriira Diddaa Abiy Ahmed, Bilxiginnaa gaggeessaniiru!!
Obsaa_Injifataa February 17, 2020 At 2:58 pm
Ergaa jabduuf gaari. Hojiin haatumsamtu.